हरेक रात दाइको यादले निदाएका छैनन यी आँखाहरु भन्दै धुरु-धुरु रोइन सदिक्षा (भिडियो हेर्नुस) | Public 24Khabar
Home News हरेक रात दाइको यादले निदाएका छैनन यी आँखाहरु भन्दै धुरु-धुरु रोइन सदिक्षा...
सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेस गरेको फाइलमा पोष्टमार्टम रिपोर्ट पेस गरिएको थियो। त्यसमा लेखिएको देखिन्– ‘सामान्य मृत्यु’। त्यति मात्र हैन, उनले फाइलमा आफ्नो दाजुको नाममा अर्कै मान्छेको फोटो राखेको समेत फेला पारिन्। घटनाबारे सबै कुरा जानकारी हुँदाहुँदै प्रहरी निरीक्षकले गलत मनसायले फोटो परिवर्तन गरेको भन्ने उनलाई लाग्यो। उनले घटनालाई झनै चनाखो भएर हेरिन्। उनलाई लाग्यो– रहस्यमय मृत्युलाई प्रहरीले नै सामान्य बनाएको र दाजुका हत्यारालाई प्रहरीले उम्काउन खोज्दै छ। त्यसपछि दुर्गा प्रहरी कार्यालयबाटै ‘फेसबुक’ मार्फत् घटनाको पर्दाफास गर्ने भन्दै ‘लाइभ’ गरिन्। प्रहरी निरीक्षक पोखरेलको कठालो समाइन्।
Previous articleबैंकमा पैसा छ ? त्यसो भए यो हेर्नुहोस, खातामा राखेको ४ लाख मध्येरातमा यसरी कसले झिक्यो ? Kala Tiwari (जानकारीका लागि सेयर गराै)
Next articleमलाई बचा*इदिनुस् ,२३ बर्षको उमेरमै यो के भयो यस्तो (भिडियो हेर्नुस्)